Mbola tsy manan-kery ilay lalàna lany tao amin’ny Antenimierampirenena momba ny toaka gasy, efa misy kaominina sasany mikajikajy sahady ny hetra alaina aminy, araka ny vaovao avy any Amoron’i Mania sy Matsiatra Ambony. Ao ireo sasany mpamokatra toaka gasy mivonona hanaparitaka izany, misy aza milaza fa tsisy sakana intsony ny fivarotana azy. Tsara ho fantatra anefa fa mbola misy dingana sy fepetra maromaro izany izay vao tena lany sy manan-kery.
Telo volana izao tsy mandray karama ireo mpiasan’ny kaominina ambonivohitra Sainte Marie. Tsy miditra ny vola ao amin’ny kaominina hatramin’ny nisian’ny valanaretina Covid-19 ka tsy zakan’ny kaominina ny karaman’ireo mpiasa ireo. Manao antso avo amin’ny minisiteran’ny Atitany sy fitsinjaram-pahefana, amin’ny faritra ny mpiasa hijery azy ireo. Tsy ny kaominina Sainte Marie ihany fa ny kaominina maro hafa.
Mampitombo isa ny mpivarotra tsy ara-dalàna na “informel” ny fahaverezan’asa anarivony maro eto an-dRenivohitra hatramin’ny nisian’ny Covid-19. Sehatrasa maro, ahitana izany fahaverezan’asa izany na fampiatoana teknika ny mpiasa. Manambara izany ny fihenan-ketra ao amin’ny tetibolam-panjakana 2020 noho ny fikatonan’ny orinasa tojon’ny krizy. Ireo olona very asa ireo no mampihena ny fanjifana, mampikatso ny toekarena.
Efa ho 1000 Ar ny kilao hitondran’ireo mpitatitra legioma avy any Antsirabe mankaty Antananarivo, hoy ny maro amin’ireo mpanangom-bokatra. Mifampisisika amin’ny legioma sy entana hafa ao ny olona, izay mbola mandoa saran-dalana hafa. Raha olona tsy mitondra entana dia mangalatra miditra amin’ireny fiara ireny, mandoa hatrany amin’ny 30 000 Ar. Tsy misy fanarahana fepetra ara-pahasalamana. Izao indray izany vao manomboka hentitra.